तीन भागपछि बन्द हुँदै कपिलको फ्यामिली टाइम...
एजेन्सी। सुनील ग्रोवरसँगको झगडापछि सुरु भएको विवादकाबीच हिजोआज कपिल शर्माको जीवनमा कयौं उतार–चढाव आइरहेका छन्। अब केही समय अगाडि सुरु भएको कपिलको शो बन्द हुने समाचार सार्वजनिक भएका छन्। भारतीय संचारमाध्यम क्विंटमा प्रकाशित समाचार अनुसार तीन एपिसोड अन एयर गरेपछि…
तेलुगू अभिनेत्री श्रीरेड्डीले सार्वजनिक स्थलमा कपडा किन खाेलिन्?
बीबीसी। ‘आफ्नो लडाइँमा म बेसहारा हुँ। किनभने मेरो पीडा कसैले देख्न सक्दैन। त्यही कारण मैले यत्रो ठूलो कदम उठाएँ र सार्वजनिक स्थलमा कपडा खोलेँ।’ यो भनाइ तेलुगू फिल्म अभिनेत्री श्रीरेड्डी मल्लिडीको हो। तेलुगू फिल्म उद्योगमा कथित रुपमा यौन उत्पीडनको विरुद्ध…
मलिना र मनिषको रोमान्समा रोमान्टिक गीत सार्वजनिक
काठमाडौं । चलचित्र ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । असार ८ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको चलचित्रको ‘तिम्रो हर सास मा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको…
जेलबाट छुटेका सलमानले बनाउने भए पहिलो पटक 'टिभी सिरियल'
एजेन्सी । जेलबाट छुटेका बलिउड अभिनेता सलमान खानले पहिलो पटक टिभी सिरियल बनाउने भएका हुन्। दुई दिनको जेल बसेको सलमानले प्रहरीको कथामा आधारित टिभी सिरियल बनाउने योजना बत्रनाएका हुन्। कालो हरिण शिकारको आरोपमा गत बिहीबार जेल परेका सलमान शनिबार समानतमा…
आलिया भट्ट बनिन् ‘पाकिस्तानी सेनाकी श्रीमती’
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट पाकिस्तानी सेनाकी श्रीमती बनेकी छन्। आलिया बास्तविक जीवनमा श्रीमती नभइ चलचित्र 'राजी'मा पाकिस्तानी सेनाकी श्रीमती बनेकी हुन्। सन् १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको यूद्धको कथामा आधारित रहेको यो चलचित्रमा आलिया कश्मीरकी छोरी, भारतीय…
‘राजी’ मा चुलबुली आलियाको ‘जासुस’ अवतार, यस्तो बन्यो ट्रेलर
काठमाडौं। अहिलेसम्म चुलबुली युवतीको भूमिका गर्दै आएकी बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट अब भने ‘सिक्रेट एजेण्ट’को रुपमा देखिने भएकी छिन् । फिल्म ‘राजी’मा उनको जासुस अवतार देख्न पाइनेछ । फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएको छ । धर्मा प्रोडक्सनले बनाउने फिल्म राजीमा आलिया…
यी हुन सबैभन्दा खतरनाक भिलेन, मृत्युबाट प्राप्त छ अमर हुने श्राप
एजेन्सी। हलिउड फिल्म ‘इन्फिनिटी वार’ मा सुपर हिरो स्पाइडर म्यान, ब्याक प्यान्थर, आर्यन म्यान र मार्वलको दोस्रो नायक हुन्छन्। यता उनीहरुका सामुने खलनायकमा रुपमा थनोस हुनेछन्। सबै सुपरहिरो मिलेर एक्लो थनोससँग उड्नुपर्छ। को हुन् थनोस : थनोस एक विकृतिले…
एकता कपुरको नागिनको डरलाग्दो तस्बिर
एजेन्सी। एकता कपुरले सोमबार मात्रै नागिन–३ को फस्र्ट लुक शेयर गरेकी छन्। यो पोस्टरमा करिश्मा तन्ना नागिनका रुपमा आउँदैछिन्। तर फेरि एकताले के पनि भनेकी छन् भने करिश्मालाई डिल रोल दिइएको छैन। अर्थात नानिको भूमिकामा अरुकै हुनेछन्। आफ्नो इंस्टाग्राममा एकताले…
मुम्बई। बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहकालागि यतिबेला राम्रो समय चलिरहेको छ। तमाम विवादकाबीच ३०० करोड कमाउन सफल फिल्म ‘पद्मावत’ कारण उनी सम्मानित हुने भएका छन्। संजय लीला भंसालीको यो फिल्ममा आफ्नो दमदार अभियनका लागि रणवीरलाई दादा साहेब फाल्के एक्सीलेन्स अवार्डबाट सम्मानित…
कपिलको ड्रग्सको लतमाथि कृष्णाको खुलासा!
एजेन्सी। अंग्रेजी वेबसाइट स्पटब्वाइका सम्पादकसँगको विवादमा अब कमडियन कृष्णाले पनि कपिलको पक्ष लिएका छन्। कृष्णाले हालै दिएको एक अन्तर्वातामा कपिललाई खुलेर साथ लिएका छन्। उनले भने, ‘फिरंगी असफल भएपछि कपिलको मानसिक अवस्था ठिक छैन। कपिलले सो फिल्ममा धेरै पैसा लगानी…